Gịnị bụ a USB flash mbanye?
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ahụkarị ụdị nke mpụga nchekwa ngwaọrụ ndị pụrụ ime ka n'aka na nke kacha mma e nyere ka onye ọrụ na nke a mere na ha nweta ihe kasị mma na nke kasị elu nchekwa eweta. The price nke USB mbanye na-adabere n'elu ohere nchekwa na a na-awa na ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu na-arụzi ụgbọala ga-eji jide n'aka na mbanye bụ zụrụ na àgwà bụ ihe na e kwesịrị mkpa. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-na-metụtara ezi USB nchekwa mbanye:
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ ndị na-egosi n'ozuzu -ndị nke ụlọ ọrụ na-mepụtara mbanye ka USB 2.0 interface na nke ochie na USB 3.0 interface emewo ya ebe na nke kacha mma n'ụzọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe atụmatụ na mmekọrita ngwaọrụ. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na mgbe a zuo na-eme ka eriri interface version na-maa enyocha na nke kacha mma n'ụzọ.
Ọ bụ ọzọ kasị mkpa na a ga-atụle nke a na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu na-arụzi ụgbọala na-abụghị nanị soro na nke a ma na ụlọ ọrụ a họọrọ na a maara ike ndị kasị mma nke kasị mma. The ọwọrọiso ụlọ ọrụ na nke a bụ Kingston na SanDisk na e-emepe emepe na draịva ụzọ kasị mma iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma N'ihi. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a mgbe niile kwesịrị anya maka ụlọ ọrụ na price bụ na-eleghara anya kpamkpam.
Ọ bụghị ọ bụla USB nwere ike igosi na otu ọrụ iche site data nchekwa dị ka ọ bụ mmepe na e agbam onya site naanị nnukwu ụlọ ọrụ na ha draịva nwere ike igosi na kasị mma na ndị ọkaibe functionalities. Ọzọ price na-mgbe a ga-atụle mgbe a USB a na-zụrụ kama onye ọrụ kwesịrị-aga n'ihi na usability na àgwà na nke ahụ bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu ngwaọrụ na ike ga-eji iji nyochaa na USB n'ọdịnihu ojiji na ndị ọzọ na Associated ihe.
The n'elu kwuru banyere ụfọdụ n'ime ihe ndị na a ga-atụle mgbe a USB a na-zụrụ Otú ọ dị, ọ bụ na-ahụ kwuru na ndepụta anaghị akwụsị na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe USB mbanye a họọrọ Mgbe na-ahọpụta a àgwà ụlọ ọrụ dị ka ha mbanye ga embed niile atụmatụ na e kwuru n'elu na ọ ga-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na okwu nke uru ego bara ha na-enweta na nke a. Ịzụta a ọma USB ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Basic nkuzi - otú iji USB flash mbanye
The USB mbanye na-eji isi dị ka isi iyi nke data nchekwa na transfer ka e mepụtara maka otu nzube. Na mgbakwunye na data transfer bụ isi ọrụ nke USB ngwaọrụ bụkwa iji jide n'aka na data a nọ nchebe na nchebe. The femụwe nke mbanye a ga-ewu site n'ịhụ na kasị mma na ndị ọkaibe omume na-eji nke a nke na ichughachiazu bụla o kwere omume malware na virus iyi egwu na nke a.
The n'ozuzu mmezi nke data na-ogologo na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na onye ọrụ na-eme ka n'aka na USB mbanye bụ nọ na jụụ na akọrọ ebe na-eme ka n'aka na antivirus Doppler na-mere oge.
Advance nkuzi - ọzọ ụzọ nke na-eji USB flash
Dị ka onye dị elu mma na USB mbanye nwekwara ike-eji na-eme ka n'aka na data na-ota na nke kacha mma n'ụzọ. Nchekwa na ndị a ga-eme ka ọ ghọọ mbanye kwesịrị ijide n'aka na ha na-nọgidere na-enwe mere na onye ọrụ mgbe chere ihu ọ bụla nke mgbe ọ chọrọ ịchọta data nke ya oke. Ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ na a na-eji udiozi ọ bụla na onye ọrụ ma ọ na-leghaara na maa ya nwere ike weere dị ka otu nke kasị mma na nke kasị elu ụzọ nke na-eji USB flash mbanye dị ka mbụ ọ bụghị na a mere n'ihi nzube a 
Ultimate nkuzi - ihe okike ụzọ nke na-eji USB flash mbanye
Dị ka ndị kacha ndu na ọ bụ-ahụ kwuru na USB mbanye nwere ike iji igbachi na Ị kpọghee ekwt kọmputa na nke kacha mma n'ụzọ na-eme ka n'aka na ọ na-anọgide nke iru nke intruders. Rue USB na-adịghị ịtinye ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri na kọmputa ga-agaghị ekwe ohere na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọ bụ ọzọ a atụmatụ na ọtụtụ n'ime ọrụ mgbe iji dị ka ọ bụ dịtụ oru na ọdịdị na onye ọ bụla nwere ike ọ bụghị mejuputa USB mgbanwe na ala na afọ ojuju. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-eji na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma dị ka mma.
Olee otú ọtụtụ n'elu kwuru banyere ụzọ e gbalịrị na ọhụrụ ọ bụla echiche na nke a?
Na-kpọmkwem na ruo n'ókè na ọtụtụ n'ime ndị mara na USB na-eji maka data nchekwa na ngwaọrụ na maka otu ihe ahụ ọ na-eji n'ihi nzube a nanị n'elu niile obi abụọ otú ahụ bụ isi nkuzi bụ a na-eto eto na nke a. Mgbe ọ na-abịa ihe okike ụzọ mgbe ahụ na-esonụ bụ ụfọdụ isi ihe ndị a ga-atụle:
1. agba obere ngwa
2. N'ozuzu OS echichi
E nwere ụzọ ndị ọzọ na onye ọrụ kwesịrị inyocha na nke a ma ọ bụ na-ahụ kwuru na online nchọgharị nwere ike inye aka.
> Resource> Flash Drive> More karịa gị nwere ike iche - ihe a USB flash mbanye nwere ike ime